← ကဏ္ဍ:မြန်မာ စာရေးဆရာများ
၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ၀၀:၃၃ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
အရေးမကြီး သေဋ္ဌိလ‎ ၀၈:၂၉ +၈၁၂‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎
အရေးမကြီး သေဋ္ဌိလ‎ ၁၈:၂၇ ၀‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ removing under construction template
သေဋ္ဌိလ‎ ၁၃:၃၇ +၃၉၆၈‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ addedaquote→‎နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့် အခြားနိုင်ငံများ၌ ဟောပြောခြင်း
သေဋ္ဌိလ‎ ၁၂:၅၆ +၁၄၆၅၇‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ nearly finished
အရေးမကြီး သေဋ္ဌိလ‎ ၁၀:၁၁ ၀‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎
သေဋ္ဌိလ‎ ၁၀:၀၂ +၁၂၉၀၂‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ added2subtitles & contents
ပါပီယွန်‎ ၀၅:၃၉ -၂‎ ‎43.245.44.57 ဆွေးနွေး‎ →‎ရေးသားသော စာအုပ်များ စာတွဲ: Visual edit: Switched
အရေးမကြီး သေဋ္ဌိလ‎ ၁၇:၄၀ +၅၅၀‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ just addedasubtitle
သေဋ္ဌိလ‎ ၁၄:၀၄ +၄၅၉၉‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ not completed
သေဋ္ဌိလ‎ ၁၀:၀၆ +၅၉၇၄‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ not completed
အရေးမကြီး သေဋ္ဌိလ‎ ၁၀:၃၄ +၃၃‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎
အရေးမကြီး သေဋ္ဌိလ‎ ၀၉:၅၈ +၂‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎စာပေသင်ကြားခြင်း
သေဋ္ဌိလ‎ ၀၉:၄၈ +၂၈၇၀၂‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ to be continued
အရေးမကြီး သေဋ္ဌိလ‎ ၁၀:၃၃ +၁၅‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎
သေဋ္ဌိလ‎ ၁၀:၁၁ +၁၂၃၄၁‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Not completed! taken facts &afew contents from ref, sentences are written inadifferent style. so, not beingadirect copy, copyrights not effective (hope so)
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:RecentChangesLinked/ကဏ္ဍ:မြန်မာ_စာရေးဆရာများ" မှ ရယူရန်